Abavelisi beeProfayili zensimbi - iChina iiProfayili zensimbi abaxhasi kunye neFektri
Powder Camera Steel Fence Post For Australia
Iposti yocingo lwesinyithi esenziwe ngesinyithi zihlala zisetyenziselwa amasango kunye neengcingo. Ubungakanani obudumileyo beAustralia ngama-50 * 50, 65 * 65, 3m ubude.
Umgubo wawutyabeka ngeposi yocingo lwentsimbi unokuba yi-DIY okanye iipaneli ezihlanganiselwe kwangaphambili ezihambelana neposti kunye neposti. I-DIY ibiza kakhulu kunikezelo kwaye sinikezela nge-aluminium slat yocingo ividiyo ye-DIY, nangona kunjalo, ukuba awunalo ixesha lokuzenzela wedwa, unokukhetha ukuba sihlanganisele kuwe ucingo lwe-slat. Kwakhona sineqela lethu loyilo, sixelele ukuphakama kocingo lwakho kunye nobude bakho bebonke. siya kukuvuyela ukwenza uyilo oluneenkcukacha kuwe.